Methyltrienolone vovoka (965-93-5) Mpanao & Mpamatsy - Factory
Ny poeta methyltrienolone dia iray amin'ireo steroïda tsara indrindra amin'ny fipoahan'ny ratra. Methly trenbolone dia ny hozatra avo indrindra hampitombo ny vokatra. Metribolone dia iray amin'ireo steroids steroids steroids du produit produits.
Vary mena (965-93-5) volo methyltrienolone
Roda Methyltrienolone roat (965-93-5) Description
Ny Rohdy Methyltrienolone Rohan dia antholic anabolic-androgen steroid oraladine 17α-alkylated nandrolone (19-nortestosterone) derivative. Tsy azo amidy toy ny fanafody amin'ny ordinatera sy ny sakafo fanampiny izy io noho ny fiantraikany amin'ny androgenic mahery sy ny toaka misy atody. Na izany aza dia matetika izy io no ampiasaina ho teboka fanondroana ny vitan'ny biolojika ho an'ny fianarana biochemika. Afaka mifatotra mafy amin'ny receptor androgen izy io ary azo ampiasaina ho marika fametavetana ny receptor androgen ao amin'ny prostate sy amin'ny tumors prostatic.
Ny fanadihadiana dia naneho fa ny fihinanana steroid anabolic amin'ny sakafo dia mety hampihena ny fivelarany. Izany dia vokatry ny hetra tsy mety voan'ny hormones amin'ny steroid, izay afaka mamela ny sasany amin'ny fanafody hamongorana amin'ny tsy fahampian-tsakafon'ny tsy fahampian-tsakafo, izay mampihena ny fihanaky ny ala ao amin'ny tranombokin'ny gastrointestinal. Ho an'ny fampiasana farafaharatsiny, ny vovobony Raw Methyltrienolone dia tokony horaisina amin'ny vavony tsy misy.
Rano Methyltrienolone roitso (965-93-5) Specifications
Product Name Rano Methyltrienolone roila
Anarana simika METRIBOLONE; Methyltrienone; 17A-METHYL-TRENBOLONE; Metribolone; Methyltrenbolon (Metribolone)
Brand Name Rano Methyltrienolone roila
Drug Class Steroids, Intermediate & Fine Chemicals; Pharmaceuticals; serial trenbolone
molekiolan'ny Formula C19H24O2
molekiolan'ny Wvalo 284.39
mitsonika Point 170 °
mangotraka Point 485.9 ± 45.0 ° C amin'ny 760 mmHg
Color mavo mavo mavo
Rano Methyltrienolone roila Application izay ampiasaina ho teboka fanondroana ny vitan'ny biôlôjika amin'ny fianarana biochemika. Afaka mifatotra mafy amin'ny mpanolo-tsain'ny androgen ary azo ampiasaina ho marika famindrana ny receptor androgen ao amin'ny prostate sy ny tumors prostatic.
Inona no atao hoe vovoka Methyltrienolone (965-93-5)?
Ny methyltrienolone dia iray amin'ireo steroids steroids steroids du produit produits. Ity agent ity dia endriky ny tranbolôna (trienolone), izay c-17 alpha alkylated izay mamela ny fitantanana am-bava. Io fanovàna io dia namorona karazana steroid izay mahery vaika kokoa noho ny zanaky ny tsy zanak'olombelona. Ny heriny dia nodidiana ho any amin'ny 120-300 isa mahery kokoa noho ny an'ny methyltestosterone, miaraka amin'ny fihanaky ny fihanaky ny anabolika sy ny androgenic effects.535 536 Milligram ho an'ny milligram methyltrienolone dia mahery setra kokoa noho ny mpividy rehetra nivarotra tao amin'ny tsena ara-barotra, mitaky doses na kely na kely. 5-1 milligram isan'andro no mahamarika ny fiantraikan'ny anabolika mahery. Ny heriny dia mifandanja fotsiny amin'ny toetry ny taranany, izay voafetra ny fampiasany maoderina amin'ny fikarohana momba ny laboratoara.
Vola vita amin'ny methyltrienolone roah (965-93-5)
Methyltrienolone, rehefa mibaribary amin'ny asidra ao amin'ny vavoniny, dia mahazo mpanolo-tsain'ny androgen ary mamehy mafy azy ireo. Ny orgônes dia tena lehilahy hormonina ho an'ny firaisana ara-nofo izay tompon'andraikitra amin'ny famokarana vokatra anabolika. Mariho eto fa ny fitaovana fototra izay manampy ireo hormones ireo dia mitondra ireo voina anabolika ireo dia ny mpanamboatra androgen. Mampirisika ny fototarazo maromaro izy ireo, izay mitarika amin'ny fitomboan'ny hery sy tanjaka.
Testosterone (iray amin'ny andrens maro) no hormone manan-danja amin'ny fitomboan'ny vatanao sy ny fanamboarana azy. Ireo mpanolo-tsaina ny androgen dia miantoka fa mamaly araka ny tokony ho izy io hormonina io. Ny testosterone dia mamehy amin'ireo mpandray ireny ary mahatratra ny sela misitery ny taolam-paty izay misy azy.
Ny methyltrienolone, amin'ny fifehezana mafy ny mpanolo-tsaina androgen, dia manampy amin'ny fanafoanana ny vokatry ny testosterone, ka hanamora ny fandresena amin'ny tanjaky ny hery sy tanjaka.
Rojo methyltrienolone roitso (965-93-5) Dosage
Ireo manam-pahaizana dia manoro anao hanaisotra dòz ambany kokoa amin'ny steroid anabolic. Ny faritra faran'izay mahomby dia heverina ho eo anelanelan'ny 0.5mg ka 2mg. Ny divay dia tokony hozaraina ao amin'ny 3-4 ampahany amin'ny doka iray nalaina ora 1.5 talohan'ny fampiofanana. Araka ny voalaza tetsy aloha, methyltrienolone dia zava-mahadomelina tena matanjaka ary mety ho maratra mafy ny fahasalamanao. Noho izany, tehirizo kely ny dosinao ary fohy ny fe-potoanao. Ny fe-potoam-paharetan'ny sikidy methyltrienolone dia herinandro 6-8. Na dia izany aza, ho an'ny vao manomboka, dia ilaina ny mitazona ny faharetan'ny fiovan'ny toetr'andro, izany hoe herinandro 4 na na dia kely aza.
Ny fikarohana dia manambara fa ny fihinanana methyltrienolone amin'ny sakafo dia mety hampihenana ny habetsahan'ny biolojika izay mety hampihena ny fiterahana ny sakafo ao amin'ny vatanao. Ny siramamy tsy voavolavola vokatry ny fihenan'ny biôlôjia dia hanakana ny fiantraikan'ny anabolic steroids. Noho izany, mba hahazoana tombony be indrindra, dia manoro hevitra anao izahay haka izany amin'ny vavonin'ny vazivazy.
Ny methyltrienolone dia iray amin'ireo steroids anabolic-mahery indrindra manana tombontsoa maro. Ireto misy lisitr'ireo tombontsoa lehibe izay hiainanao mandritra ny fiaramanidina miaraka amin'ity zava-mahadomelina ity:
(1) Tsy aromina izany. Midika izany fa tsy mivadika ho estrogen izy io. Mariho eto fa estrogen ny hormone mampivelatra ny tetezana, ary manara-maso ny tsiranoka amin'ny ratra sy ny fiterahana amin'ny vehivavy. Noho izany hormones izay mivadika ho estrogen dia mety hitarika anao amin'ny gynecomastia, izany hoe tolo-bozaka lava amin'ny lehilahy. Ankoatra izany, ny haavom-pandrefesana ambony ao amin'ny vatana dia mety mitarika aretim-po sy kanseran'ny prostaty. Saingy tsy mila manahy ianao fa rehefa mandeha bisikileta miaraka amin'ity zava-mahadomelina ity ianao dia tsy manan-kialofana amin'izany rehetra izany satria tsy mivadika ho estrogen.
(2) Satria tsy mivadika ao amin'ny estrogen, dia mitazona ny vatan'ny mpiserasera amin'ny fiarovana ny rano amin'ny alàlan'ny fanafoanana rano tsy ilaina avy amin'ny vatany. Noho izany dia azonao ampiasaina mandritra ny sakafo izany na mandritra ny fanomanana fifaninanana.
(3) Mampitombo ny hamafin'ny muscle. Zavatra tsy ampy / fanononana tsy ampy amin'ny teny esperanto Ny steroïde maro dia mampiseho fitomboana manan-danja amin'ny fitomboan'ny taovam-pananahana, nefa vitsy no mitarika ho amin'ny fahasosoran'ny tebiteby miaraka amin'izany. Ny methyltrienolone dia steroid iray izay miantoka ny fahasosoran'ny ratsantanana izay manome ny vatanao ao amin'ny fijerena matanjaka kokoa.
(4) Hahazo fitomboana lehibe ianao rehefa hihodina amin'ity steroid ity. Hanampy anao mandritra ny fotoam-pivoaranao izany amin'ny fampitomboana ny herinao sy ny herinao. Izany no hahafahanao hampiofana kokoa sy matetika kokoa.
(5) Mampitombo ny vascularity. Amin'ny maha-atleta anao na bodiby, dia tena tianao ny andian-tsarobidy mendri-piderana, mba hanomezana ho anao kokoa ny hozanao.
(6) Mahery indrindra izy io ary azo ampitahaina amin'ny stacks of 2 amin'ny 3 steroïde mahery fihodinana amin'ny fotoana iray. Noho izany, na dia ny fihenan-tsakony amin'ny dosie kely aza dia miteraka ho an'ny fitomboan'ny hantsana sy ny tanjaka.
Buy Buy Methyltrienolone from Buyaas.com